Vavaka ho an'ny ankizy. ? Ràn'i Kristy sy ny Fanahy Masina
Vavaka ho an'ny ankizy. Izy ireo no anton'ny fifaliana sy ny alahelo mahery vaika azon'ny olona rehetra hahatsapa. Izany no antony mahatonga ny fampiakarana a vavaka ho an'ny ankizy amin'ny Ràn'i Kristy sy ny Fanahy Masina dia zavatra fahita indrindra.
Raha vao fantatsika fa misy izy ireo dia feno zava-manahirana sy fihetseham-po izay matetika sarotra ny manazava ny fontsika.
Ny fametrahana ireo olana rehetra ireo ao anaty vavaka dia ny zavatra tsara indrindra azontsika atao amin'ny ray aman-dreny rehefa mampiseho fihenjanana na fanahiana tafahoatra isika.
Amin'izao fotoana izao, raha toa ny filaharana ny andro sy ny toerana mety hitondrana ny ankizy, indrindra amin'ny fahazazan'ny fahatanorana dia toa mahatsapa ny zavatra ratsy rehetra izay miharatsy amin'ny tontolo iainana.
Izany no antony, tsy lavitra ny mandrara an'izany na izany, ny zavatra tokony hataonao, ankoatry ny fanabeazana tsara, dia ny toerantsika eo akaikin'ny vavaka.
1 Vavaka ho an'ny ankizy Tena mahery vaika ny vavaka?
1.1 Vavaka amin'ny ran'i Kristy ho an'ny ankizy
1.2 Vavaka amin'ny Fanahy Masina ho an'ny ankizy
1.3 Ny vavaka ho an'ny zanaka mpikomy
1.4 Vavaka ho an'ny arisitra ho an'ny ankizy
Vavaka ho an'ny ankizy Tena mahery vaika ny vavaka?
Betsaka ny mpamaky tsy fantatsika raha mahery ny vavaka.
Malaza ho mahery izy ireo, ary mahery mihitsy aza.
Ny vavaka ataontsika Ara-dalàna izy ireo.
Miala amin'ny Baiboly, tranokalan'ny Eglizy Katolika ary loharanon'ny fahatokisan-tena izy ireo.
Mahery sy miasa daholo izy rehetra.
Noho izany, raha toa ianao ka maniry vavaka matanjaka ho an ’ireo ankizy, dia efa fantatrao fa manana 3 eto ambany ianao. Mivavaha amin'ny finoana lehibe. Mino mandrakariva ny herin 'Andriamanitra. Araka izany dia tsy mila mahomby izany.
Vavaka amin'ny ran'i Kristy ho an'ny ankizy
Ry Ray mahery ô, misaotra anao izahay noho ny nanomezany anay ireto zanaka ireto.
Fifaliana ho antsika ary ny ahiahy, tahotra sy harerahana mandalo antsika dia manaiky azy ireo amin'ny fahatoniana isika. Ampio izahay hitia azy ireo am-pahatsorana.
Tamin'ny alalanao no nitondranao fiainana; Hatrizay hatrizay dia efa nahalala sy nitia azy ireo ianao.
Omeo fahendrena izahay hitarika azy ireo amin'ny faharetana mba hampianarana azy ireo hitandrina azy ireo hahalala tsara azy ireo amin'ny alàlanay ohatra.
Manamafy ny fitiavanay ianao hanitsy azy ireo sy hanatsara azy ireo.
Sarotra be indraindray ny mahatakatra azy ireo hahatanteraka ny tiany, ny hanampy azy ireo hanao ny lalany.
Ampianaro anay ny Rainao tsara araka ny fahamendrehan'i Jesosy Zananao sy Tomponay.
Tianao ny Ramaan'i Kristy ho an'ny ankizy ny vavaka?
Ny filazana fa ny Ràn'i Kristy dia mbola mikoriana eo amin'ny hazo fijaliana dia fahamarinana izay maro no sahy hisalasala.
Na izany aza, ity ra ity dia mbola mitoetra mahagaga amin'ny fomba lehibe ary tsy Izy irery dia mahomby amin'ny fanadiovana ny fahotantsika Izy io dia afaka manampy antsika hamaha ny toe-javatra mitranga sy bebe kokoa raha ny zanatsika.
Jesosy, amin'ny maha-zanaka tsara dia mahalala sy mahatakatra ny zavatra rehetra azon'ny ankizy zakaina, isaky ny azo alaim-panahy hanao zavatra tsy tsara ho azy ireo izy ireo ary tsy hainy na tsy te hahita.
Ho an'izany rehetra izany dia ny fangatahana ny ra amin'ny fangatahana manokana ho an'ny ankizy, ankoatra ny manome antsika ny filàna ilaina hiandrasana ny fahagagana, afaka matoky isika fa hanampy antsika ary tsy ho ela izany dia ho afaka hahita izay angatahintsika.
Vavaka amin'ny Fanahy Masina ho an'ny ankizy
Tompo ô, ampamirapirato ny sain'ny zanakay mba hahafantaran'izy ireo ny fomba itiavanao azy ireo, mba hanomezany voninahitra anao ary hahatratra ny famonjena.
Tazony amin'ny herinao izy ireo, mba hamporisihany ireo foto-kevitry ny Fanjakanao amin'ny fiainanao.
Ampamirapirato koa izahay ray aman-dreninao mba hanampy azy ireo hahafantatra ny fiantsoan'izy ireo Kristiana ary hanatanteraka izany am-pahalalahan-tanana, miaraka amin'ny aingam-panahy anaty.
Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy dia navelany ho any amin'ny Fanahy Masina isika mba ho orinasa maharitra isan'andro mandra-piverenany.
Tsy misy olona mahalala antsika tsara kokoa noho izy, tsy ny tenantsika akory aza.
Rehefa niahiahy izahay dia naneho ny tenantsika, rehefa nitomany izahay zazalahy iray, ny Fanahy Masina tao dia miambina antsika ary izy mikarakara an'io zanakalahy io na aiza na aiza misy azy.
Mangataka aminy amim-pinoana sy fahatokisana isika fa hanampy antsika izy ka hanao izay rehetra andraisana ny cache tokony ho azony, haingana kokoa noho ny nantenaintsika.
Ny vavaka ho an'ny zanaka mpikomy
Andriamanitro, manolotra anao ho zanako; Dia nomenao ahy izany, fa anao mandrakizay izy; Mampianatra azy ireo ho Anao aho ary mangataka aminao mba hitandrina azy ireo ho voninahitrao. Tompo, enga anie ho feno fitiavan-tena, faniriana, ratsy tsy hampiala anao amin'ny lalana tsara.
Izy ireo dia manana hery hihetsika manohitra ny ratsy ary ny antony manosika ny asany rehetra dia ny tsara sy ny tsara ihany.
Maro ny faharatsiana eto amin'ity tontolo ity, Tompoko!
Fantatrao ny fahalementsika sy ny fahataitairana mahavariana anay; fa momba anay ianao ary apetrako eo ambany fiarovanao ny zanako.
Omeo hazavana, hery sy fifaliana eto ambonin'ity tany ity ry Tompo, mba honenan'izy ireo ho Anao eto ambonin'ny tany; ary any an-danitra, miaraka izany dia afaka mankafy ny fiarahanay.
Ny fikomiana amin'ny ankizy dia zavatra azontsika manomboka manomboka ny hatramin'ny fahazazana ary amin'ny fotoana tokony hanombohanao azy Mangataha fanampiana nalefa avy any an-danitra.
Imbetsaka isika ray aman-dreny dia mila adiresy mba hahafantarantsika izay tokony hatao sy izay tsy tokony atao, mba hanampiana ny fikomiana amin'ny zanakay.
Didiana ao a vavaka ho an'ny zaza maditra, avy amin'ny fanahy ka omena fahendrena sy torohevitra tsara ho an'ny zanatsika isika no tsara indrindra vitantsika.
Vavaka ho an'ny arisitra ho an'ny ankizy
Ry Ray malala sy Tomponay ô, tahio amin'ny Fitiavanao ity vavaka ity infinito ka rehefa mamela ny molotro ny hery tsy takatry ny foko, ny tafiky ny lanitrao rehetra dia mamaly ny antsoko amin'ny fanomezana ny zanako izay takian'izy ireo amin'ny fivoarany sy ny fahasambarany.
Sarony amin'ny fanatrehanao ity vavaka am-pahatsorana ity ary aza mamela ny ratsy na ny fahadisoako. Arkanjely malala Michael Miantso anao amin'ny anaran'ny Tompo aho haka ny zanako sy hiaro azy amin'ny sabatrao amin'ny zava-dratsy rehetra.
Tapaho ny fanelingelenana sy fatorany azy ireo, avoahy izy ary manome finoana matanjaka mba tsy hivoahany amin'ny fomba tsara. Arkanjely Jofiel malalako, miantso anao amin'ny anaran'ny Tompo aho hamelona ny zanako amin'ny fahazavana fahendrena.
Ampio izy ireo hampivoatra ny fahaiza-manaony sy ny fahaizany, hanalavitra azy amin'ny fahadisoana, ny fahazarana ary ny tsy fahalalana. Amporisiho izy ireo hianatra sy handresy lalandava foana ary hamily ny làlany mba hahafahany manatontosa ny asany ary ho faly eto an-tany.
Ilay malalako Archangel Chamuel miantso anao amin'ny anaran'ny Tompo aho mba hameno ny zanako amin'ny Fitiavana, sitrano ny fony ary avelao izy ireo hahafantatra ny Fitiavana marina sy hitandrina izany.
Ampio izy ireo hiaina mifanaraka amin'ny zava-drehetra el tontolo ary omeo azy ireo ny fahaizana ho tsara fanahy sy ho tia nefa tsy malemy na voatarika amin'ny ratsy.
Enga anie ny Jiro izay mamirapiratra ao amin'ny fanahiny tsy ho afaka na oviana na oviana. Koa ho izany ho fitahiana ny ankohonantsika sy ny voninahitr'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay.
Voalaza fa ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia manana anjely notendrena, saingy tsy mitovy amin'izany ireo arkeels ary tafiditra ao anatin'ny laharana ambaratonga hafa ao anatin'ny tafika selestialy izy.
Azontsika ampiasaina amin'ny fotoana ilana azy io.
Mpiady, mpiady ary namantsika, ny Archangels dia vonona hanampy hatrany antsika amin'ny ady izay tsy hananantsika hery.
Raha ny amin'ny ankizy dia tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny iray amin'izy ireo hiady fandresena amin'ny faritra rehetra ilain'ny ankizy.
Ny vavaka ho an ’ireo ankizy hatrany amin’ ny Ràn’i Kristy, ny Fanahy Masina ary ny Archangels dia miasa ihany mba hiarovana sy hampisaraka ny ankizy amin ’ny fomba ratsy.
Noho izany, tsy matahotra ny milaza ny fehezanteny rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity ianao.
Ny zava-dehibe dia ny mino ny herin'Andriamanitra sy hanana finoana.
Mivavaha tsy amin-tahotra, dia hihazakazaka tsara ianao.